Fosh Ferdinand ingenye ojenene edume kakhulu French. Ubelokhu ezimpini ezimbili. Duzane uFerdinand zigoqiwe umbuso, ukwanda kokukhiqizwa okwenzeka, izigidi wafa. Ngaphezu impumelelo enkundleni yempi, Marshall waba neqhaza elikhulu ekuthuthukiseni ezindabeni zezempi. Imisebenzi yakhe namanje wafunda emhlabeni.
Fosh uFerdinand: Biography emfushane
Ferdinand wazalwa yesibili ngo-Okthoba 1851 e Tarbes. Abazali bakhe izikhulu mkhulu kakhulu futhi wadlala indima ebalulekile empilweni edolobheni. Ngakho-ke, Foch kwakukuhle ngezindinganiso sikhathi, imfundo. Waya esikoleni, futhi ngemva kokuqedwa kwalo engena ongumJesuit ekolishi e Saint-Etienne.
Ngo-1869, uqala izinguquko ibutho kuleli zwe. Uhulumeni kanye umbusi uqonde ingozi ulenga phezu France I-Prussia bese uzama ngokushesha ulungiselela impi kungenzeka. Fosh uFerdinand ebuthwa ukuba abe ilungu ibutho ngisempini kotoromi ivela 1870.
Franco-Prussian neMpi (1870-1871 biennium).
Prussia lalilungiselela ukuya empini kusengaphambili futhi becabanga isinyathelo ngasinye. UMbusi French wayengakwazi ngokwanele ukuhlola isimo, wawela ogibeni ehlelwa Bismarck. Ibutho lamaJalimane lasungula okuhlaselayo ngoJulayi. Amabutho uthi kuye German azihlanganisa Prussia futhi babe ukulungele kahle futhi ifakwe izikhali zanamuhla, kuyilapho ibutho French akazange nanesikhathi kahle futhi, eqinisweni, wabanjwa lingaqaphile.
Ukuwa amabutho aseJalimane ovinjezelwe Paris. Fosh uFerdinand ayelwa egibele yayibambene. Ibhalansi amabutho kwaba cishe okufanayo, kodwa ibutho French Yayinesikhwanyana nabezempi ikakhulu reserve amasosha kanye ningatholakala ngokuxhamazela waqoqa. Ngakho-ke, ungcono ngani ibutho njalo German yayisobala. Futhi ngo-1871, Napoleon III ngemvume Zinikeleni eyihlazo, ngawo France waphoqwa ukuba akhokhele i-lokumiswa omkhulu yasePrussia.
Ngemva kwempi, Fosh uFerdinand enquma ukungaqhubeki silandela ezinyathelweni zikayise, futhi ngiqhubeke nomsebenzi lakhe lempi. Lapho eneminyaka engu-amabili, engena Ephakeme Polytechnic School. Kodwa akakwazanga ayiqede, uFerdinand. Ngo-1873, ibutho Republic French ihlangabezana i Ukushoda okukhulu kwabantu abasebenzi. Ngakho-ke, ngisho ngaphandle kokuqeda Ephakeme Polytechnic School, Foch wathola isihloko wezikhali uLieutenant. Iveza service 24 wezikhali ibutho.
Ngemva kweminyaka emine, wathola iziqu Academy e-General Assembly Abasebenzi. Iqala imisebenzi yesayensi. Uhlola isu kanye amaqhinga zempi. Ngo-1895 waba uprofesa futhi waqala ukufundisa esikoleni, okuyinto hhayi ngakho kudala futhi wathola iziqu. Sinesithakazelo ngokukhethekile uFerdinand isifundo esiphathelene isu Napoleon Bonaparte sika.
Amaqhinga ka mpi, kuyothuthuka uma sicabangela izindlela zesimanje zempi. It uyaqhubeka ngokuningiliziwe ukuqaqa impi ewumnqamula-juqu besizukulwane seMpi Franco-Prussian, kuyo Wathatha ingxenye. Ngo-1908 waba inhloko yalawa Academy e-General Assembly Abasebenzi.
Foch emsebenzini ucwaningo emkhakheni ngempi nomlando amacebo. ngemuva kokuthola ehhovisi lakhe okusezingeni eliphezulu ithunyelwa Empire isiRashiya, iminyaka emibili kuya iqhaza zijike ngokushesha.
Ngo-1912, induna lesishiyagalombili Army Corps baba Fosh uFerdinand. Izinkumbulo ayebambisene Marshal eziqukethe ngayo ukwaziswa yena wethuka kakhulu ticale indawo entsha. Kodwa ngemva konyaka ukuphathisa ngaphezulu combat-ngomumo uxhumano - Twentieth Army Corps.
IMpi Enkulu Ferdinand Foch ahlangana Nancy. Amasosha akhe cishe kusukela ezinsukwini zokuqala waba nengxenye ekulweni. Igalelo lokuqala Empire German wawela phezu indawo waseBelgium. Ekuqaleni, kuleli zwe limenyezelwe ukungathathi hlangothi kwayo, kodwa French kucatshangwa ukuthi uzoqala ayehlasela ngokusebenzisa Belgium. Ferdinand Foch ngokuphindaphindiwe bakhomba ngobuthakathaka umngcele French-waseBelgium.
Futhi hit ibutho lamaJalimane. Polutoramillionnom iqembu ngezinsuku ezimbalwa, ekuthatheni Belgium futhi zayiswa emngceleni French. Uma kungenjalo ukuvikela nobuqhawe Liege, amabutho amaZwe Asizanayo bekuzokuba ongenaso isikhathi sokungena emngceleni osempumalanga. Ferdinand Foch induna the Twentieth Army Corps. Ngokushesha ngemva kweMpi Yezwe II, amasosha akhe yahlasela Lorraine. Le ndawo sasuswa France ngenxa yeMpi Franco-Prussian. Futhi okungenani kokuquleka ngokwengxenye, ngokuvumelana Jikelele Abasebenzi, kwaba zokuthuthukisa isimo salo amasosha. Futhi konke kuqala kwaba ngempela evumayo. Nokho, maphakathi no-September, amaJalimane counterattacked waxosha French emuva kuze kube semngceleni.
Okuningi ngosuku olwandulela empini eFrance kukhona abasekeli ngaphezulu izinguquko ezinkulu impi phakathi kwabo kwakukhona Fosh uFerdinand. izingcaphuno UProfesa ishicilelwe Amakhasi phambi amaphephandaba. Kodwa Ababesadla ngoludala akazange ufuna ukushintsha isiko. Ibutho lamaJalimane is rearmed ngokugcwele futhi izinqumo amasu enziwa, sakhela phezu amakhono izikhali ezintsha.
France nazo zaqhubeka zikhona phansi amandla wezikhali. Forts aphelelwe yisikhathi, futhi ojenene akazange ufuna ukushintsha indlela komkhuba ezingxenyeni zalo. Iphuzu okunothando kakhulu ukusetshenziswa ifomu ubudala. Empire German kanye-Austria-Hungary waya emcimbini iyunifomu ukucasha grey noma onsundu, kanti ifomu yebutho French kuhlanganisiwe ibhulukwe elibomvu futhi iyunifomu eluhlaza okwesibhakabhaka. Ezinsukwini zokuqala zempi, izikhulu aya empini, egqoke amagilavu mhlophe futhi ingubo iyunifomu, nokukhanya sizibeka engozini lapho sebegqoke izingubo zabo elikhanyayo. Ngakho-ke, lo jikelele wathatha kabusha esiphuthumayo yempi.
Kuzo zonke izingxenye babe ngokuxhamazela "esingalindelekile" amasosha, onjiniyela French abangu ngabomvu uzama ukwandisa isibalo izikhali zanamuhla. Kakade ekuqaleni kuka-September, yaqala enye yezimpi ezinkulu kunazo zonke onyakeni wokuqala empini - empini Marne.
Ukuhlasela iqembu elaliholwa French Fosh uFerdinand. I nkumbulo lezo zenzakalo Marshal umoya ophithizelayo wesiyaluyalu nesiyaluyalu, lapho amasosha wahlala. Ngenxa yokushoda izindlela zokuhamba of amasosha amaningi empini alethwe itekisi. Kodwa le mpi uvunyelwe ukumisa ngaphambi namaJalimane uqale kokuzama impi positional, okuzokwenza kuphela kuphele ngemva kweminyaka emine.
Ngentwasahlobo ka-1918, Marshal uFerdinand Foch wayeyinhloko Armed Forces of France. Nguye wasayina Compiègne ukuxolelana elaphela kweMpi Yezwe Yokuqala. Kwasekusithi ngosuku nanye Novemba imoto siqu isitimela.
Ngemva kwempi, washeshe wahileleka ngcono amacebo empi kanye namasu. Ukulungele angenele endaweni Soviet Russia.
ngosuku lwamashumi amabili Mashi 1929 e-Paris, wafa Fosh uFerdinand. Isikhumbuzo Umlawuli usethe Paris 'Invalides.
Nkulunkulu Eros - enhle Greece yasezulwini
Indlela yokwenza i manicure ekwindla nge impungushe?
Kangakanani ekwelapheni lamabutho ngwengwzi?
Izimpawu zokuhambisana: I-Scorpio ne-Gemini
Kungani dream mayelana isikhala: ukuchazwa
Arbutin - lokho nalokho isetshenziselwa? Kusetshenziswa imithi futhi Cosmetology
"Holiday Park Indzawo yekungcebeleka" (Turkey): abahambi Izibuyekezo